China ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သိုးရေညှပ်ဖိနပ်တွေဟာ Cold Feet ရဲ့အကောင်းဆုံးဖိနပ်စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | Yiruihe
သိုးမွေးမြူခြင်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောလျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်းထောင်ချီ။ လူတို့၏ပူနွေးခြောက်သွေ့မှုနှင့်ကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းပေးသည်။ Sheskskin ၏သဘာဝဂုဏ်သတ္တိများသည် insulator တွင်သာမကဘဲ၎င်းတို့သည်ရှူရှိုက်မိခြင်းနှင့်အစိုဓာတ်ကိုပျက်စီးစေသည်။ ခြေထောက်ခြောက်သွေ့အောင်လုပ်ခြင်းသည်ဖိနပ်တွင်အမြဲတမ်းနွေးထွေးသောအပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းထားရန်အရေးကြီးသည်။
ခြေနွေးကိုထိန်းသိမ်းရန်မည်သည့်အခြားဖိနပ်ပစ္စည်းမဆိုသဘာဝသိုးမွှေး၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုမပေးနိုင်ပါ။ faux ညှပ်ခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်အမြှုပ်နှင့်ဝါဂွမ်းစသည့်ဓာတုပစ္စည်းများသည်အစိုဓာတ်ကိုထိန်းထားနိုင်ပြီးသင်၏ခြေထောက်ကိုအေးစေသည်။ အကောင်းဆုံးသောဖိနပ်များနှင့်အအေးခြေထောက်အတွက်အကောင်းဆုံးအိမ်ဖိနပ်များကိုသိုးမွှေးဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းတို့ကိုဘဝကို ပို၍ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေလိမ့်မည်။
ဆောင်း ဦး ရာသီ သင့်တွင် Raynauds သို့မဟုတ်လည်ပတ်မှုနည်းပါးလွန်းပါကဤနှစ်၏အချိန်သည်အတော်ပင်ဒုက္ခရောက်နေသည်။ သတင်းကောင်း! အဖြေတစ်ခုရှိပါတယ်။ အေးအေးဆေးဆေးအနားယူခြင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုငါတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီ။
သငျသညျဒြပ်ပစ္စည်းများ, လုပ်ညှပ်စီတန်း, sherpa သို့မဟုတ်ဝါဂွမ်းကနေဖန်ဆင်းတော်ဖိနပ်ဝယ်ယူခဲ့လျှင်သင်အအေး feed ကိုများအတွက်အလားအလာကုထုံးအဖြစ်ဖိနပ်လျစ်လျူရှုဖို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံပေမည်။ ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာတကယ်တော့ - ခြေထောက်အအေးအတွက်အကောင်းဆုံးအိမ်ဖိနပ်ဟာသိုးမွှေးပါ။
သိုးမွေးသည်အဘယ်ကြောင့်ချမ်းအေးသောခြေထောက်အတွက်အကောင်းဆုံးအိမ်ဖိနပ်ဖြစ်သနည်း။ ကောင်းပြီသင်မသိသေးသောသိုးမွှေး၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခေတ်သစ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအရအထည်အလိပ်များသည်လူများစွာသည်သိုးမွှေးများကိုအလွန်ခြစ်ရာ။ သို့မဟုတ်ချွေးစေးများလွန်းသည်ဟုရိုးရှင်းစွာမှတ်ယူတတ်ကြသည်။ သို့သော်အမှန်တရားနှင့် ထပ်မံ၍ မဖြစ်နိုင်ပါ။ သိုးမွှေး, သင်မြင်, မူရင်းစွမ်းဆောင်ရည်ထည်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Dryfit မတိုင်မီ၊ polyester မတိုင်မီ၊ ချည်များကိုချည်ထဲမထည့်ခင်ကလူတွေဟာသိုးမွှေးအ ၀ တ်အစားတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ ၁၇၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေရဲ့ဥရောပမှာသိုးတွေကိုတင်ပို့တာဟာတရားမ ၀ င်ဖြစ်လာပြီးသူတို့ရဲ့သိုးမွှေးကိုလူ့ဘ ၀ အတွက်အလွန်တန်ဖိုးထားပြီးလိုအပ်သည်။ ယနေ့တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာကာသစခန်းရှိအာကာသယာဉ်မှူးများသည်သူတို့၏အာကာသဝတ်စုံများအောက်တွင်သိုးမွှေးနံရံများကိုဝတ်ဆင်ကြသည်။ ဒါဆိုသိုးမွှေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာထူးခြားလဲ။
မော်လီကျူးအဆင့်တွင်သိုးမွှေးသည်တိရိစ္ဆာန်ဆံပင်ဖြစ်ပြီးအမိုင်နိုအက်ဆစ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောရှုပ်ထွေးသောအော်ဂဲနစ်ဓာတုဓာတ်ဖြစ်သော keratin ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသော keratin အမျိုးအစားများသည်လက်ချောင်းများမှလူ့ဆံပင်အထိတိရစ္ဆာန်အခွံအထိဖြစ်သည်။ ဖိုင်ဘာအနေဖြင့်၊ keratin သည်အလွန်အထင်ကြီးသောဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ ၎င်းသည်ပေါ့ပါးသော်လည်းကြာရှည်ခံပြီး ၄ င်း၏အလေးချိန်၏ ၁၅% ကိုရေတွင်စုပ်ယူနိုင်သည်။ ဒါကသိုးမွှေးကခြေထောက်တွေကိုချွေးစေးစေးစိုစေခြင်းမှကာကွယ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည်သင်၏ခြေထောက်မှအစိုဓာတ်ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးစုပ်ယူသည်။ ထို့နောက်လေထဲသို့အငွေ့ပြန်စေရန်ပြင်ပအလွှာများသို့ပို့ပေးသည်။
ခြောက်သွေ့သောခြေသည်နွေးသောခြေဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်တောင်တက်သမားများနှင့်တောင်တက်သမားများသည်သိုးမွှေးခြေစွပ်ကိုဝတ်ဆင်ကြသည်။ အလွှာစုံဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသောသိုးမွှေးဖိနပ်များသည်အခြေခံအားဖြင့် steroids တွင်သိုးမွှေးဖြစ်သည်။ အားကစားကုန်ပစ္စည်းကုမ္ပဏီများသည်သိုးမွှေးကိုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်အထည်များအတွက်လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်မီနည်းပညာအားလုံးနှင့်အတူ၊ မည်သည့်ဒြပ်ထည်သည်မျှော့၏သဘာဝအနိုင်စွမ်းနှင့်လုံးဝမကိုက်ညီပါ။
သိုးနှင့်အမျှထူသောသိုးမွှေးကိုရေနှင့်ပွတ်တိုက်အား သုံး၍ ဖန်တီးသောအခါ၎င်းသည်အထင်ကြီးစရာကောင်းသောကာရံထားသည့်ဂုဏ်သတ္တိများကိုအထောက်အကူပြုသည့်လေအိတ်ကပ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အကြီးမြတ်ဆုံးလျှပ်ကာပစ္စည်းတစ်ခုမှာလေဖြစ်သည်ကိုသင်သိပါသလား။ အဲဒီလို့ဘာဖြစ်လို့? ဒီနေရာတွင်သိပ္ပံနည်းကျသင်ခန်းစာပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ လေသည်အပူသို့မဟုတ်စွမ်းအင်ကိုအကျိုးရှိစွာမပို့နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပူနွေးသောလေသည်ပိတ်မိသွားသောအခါနွေးနေလေ့ရှိသည်။ သိုးမွှေး၏အမျှင်ဓာတ်များပါဝင်မှုနှင့်လေထုအတွင်းရှိအိတ်ကပ်များသည် ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုတွင်ဖန်တီးထားသောကြောင့်သိုးမွှေးဖိနပ်သည်ပိန်သော၊
post အချိန်: မတ်လ -19-2021